एस बैंकको घटनाबाट नेपालले के सिक्ने?
एस बैंकको घटनाबाट नेपालले के सिक्ने? 'नाफा बढी देखाउन खराब कर्जा लुकाउनु घातक'
अरुण सापकोटा सोमबार, फागुन २६, २०७६, १३:३६
काठमाडौं- आक्रामकरूपमा व्यवसाय विस्तारको परिणाम सधैं राम्रो नहुने उदाहरण भारतको एस बैंक बनेको छ। बजार विस्तार गर्दै बजार हिस्सा वृद्धिको दौडमा एस बैंक पछारिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनको संवेदनशीलता नबुझी नाफा बढाउने र शेयर बजारमा मूल्य बढाउने नाममा हुने होडबाजीले दुर्घटना निम्त्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। यदि नेपाली बैंकहरूले पनि भारतको एस बैंककै जस्तै व्यवसाय बढाउने नाममा जथाभावी लगानी गरे र सुशासन कायम गर्न सकेनन् भने ठूलो दुर्घटनामा पर्ने उनको टिप्पणी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पुँजी बढाएपछि पछिल्ला केही वर्षमा नेपाली बैंकहरू पनि धेरै नै आक्रामक देखिएका छन्। अहिलेको अवस्थामा भारतीय बैंक र नेपाली बैंकहरू बीचमा तुलना गर्न सक्ने अवस्था नरहे पनि नेपाली बैंकहरू सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। भारतमा ७० प्रतिशत बजार सरकारी बैंकको र ३० प्रतिशत मात्रै निजीस्तरका बैंकहरू रहेका छन्। जसले गर्दा निजी बैंकहरू सरकारी बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।
कतिपय निजी बैंकहरू सरकारी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होडमा अहिलेको अवस्था आएको हो। सरकारले प्राथमिकता प्रदान गरेका क्षेत्रमा सरकारी बैंकले नै कर्जा प्रवाह गर्ने तथा निक्षेप संकलन गर्छन्। उनीहरू सरकारबाटै संरक्षित हुन्छन्।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र ठीक उल्टो छ। निजी क्षेत्रका बैंकहरूको बजार हिस्सा ९५ प्रतिशत छ भने सरकारी बैंकको बजार हिस्सा जम्मा ५ प्रतिशत छ। यस कारण निजी क्षेत्रका बैंकहरू सरकारको पनि प्राथमिकतामा पर्छन्। नेपालमा निजी बैंक र सरकारी बैंकका लागि अलगअलग नीति बन्दैनन्।
भारतको एस बैंकको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी विजनेस बढाउने नाममा आक्रामकरूपमा बजार विस्तार गर्‍यो। कतिपय नेपाली बैंकहरूमा पनि यही रणनीति छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंकहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने गरेकोले वजार विस्तार गर्दैमा नेपाली बैंकहरू समस्यामा छन् भन्न नमिल्ने थापाको तर्क छ।
एस बैंकले खराब कर्जा लुकाउन ऋणीलाई ओभर ड्राफ्टको औजार प्रयोग गर्न दिनु नै सबैभन्दा धेरै घातक रहेको थापाको विश्लेषण छ। बैंकले वित्तीय विवरणलाई पारदर्शी रूपमा नदेखाइ आफू अनुकूल बनाउँदै लैजाँदा अहिलेको दुर्घटना भोग्नु परेको हो। सबैकुरा लुकाउँछु भन्दै गर्दा एक दिन न एक दिन सार्वजनिक हुने हुँदा नेपाली बैंकहरूले पनि आफ्ना वित्तीय विवरण स्वस्छ र पारदर्शीरूपमा देखाउँदै लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै पक्षलाई नजिकबाट नियालीरहेको हुँदा नेपाली बैंकहरूले आफूखुसी बदमासी गर्न नसकेको थापाले बताए।
भारतको एस बैंकको जस्तै अभ्यास नेपाली बैंकमा जलविद्युत कम्पनीहरूको कर्जामा देखिएको छ। यसले तत्कालका लागि नेपालका बैंकहरू कुनै पनि समस्यामा नदेखिए पनि भविष्यमा जलविद्युत् कम्पनीहरूको कर्जामा कुनै समस्या आयो राम्रो नहुने हिमायन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बताए।
जलविद्युत् कम्पनीमा गरिएको लगानी नेपाल सरकारले प्राथमिकता प्रदान गरेको क्षेत्रमा भएको हुँदा धेरै समस्या नहुने थापाको तर्क छ। तर, यस्ता कर्जालाई 'वाच लिष्ट'मा भने पार्नु पर्ने उनले बताए।
एस बैंकको अर्को नराम्रो पक्ष व्यवसाय विस्तारको नाममा आक्रामकरूपमा शाखाको विस्तार पनि हो। शाखा बढाउँदा नयाँ कर्मचारी आवश्यक पर्छ जसको परिणाम सञ्चालन खर्च अधिक बढ्यो। यो अवस्था भने नेपाली बैंकसँग मिल्छ। पछिल्लो समय नेपाली बैंकको सञ्चालन खर्च शाखा विस्तारकै कारण बढिरहेको छ। यस्तो हो भने बैंकहरूले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ।
यसको उपाय बैंकिङ प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने हो। मानिसले गर्ने कार्य प्रविधिमार्फत भयो भने त्यसले बैंकको खर्च कटौतीमा मद्दत गर्छ। नेपाली बैंकहरूले अबका दिनमा प्रविधिको लागि सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ। 'बैंक सञ्चालन गर्दा दुई कदम अगाडि हेर्नुका साथै एक कदम पछाडि हेर्न पनि सक्नुपर्छ। यदि अगाडि पछाडि फर्केर हेर्न जानिएन भने कुन बेला खाल्डमा परिन्छ थाहा हुँदैन,' लामो समय राष्ट्र बैंकमा काम गरेका थापा भन्छन्, 'बैंकहरूले आफूले लिएको रणनीति कत्तिको दीगो हुन्छ हेर्न जरूरी छ। यदि आफूले लिएको रणनीति विफल हुने अवस्था आयो भने तुरून्तै अर्को रणनीति अख्तियार गर्न सक्नुपर्छ।'
भारतको एस बैंक सञ्चालनमा आएको १६ वर्षमा ढल्ने अवस्था आएकाे छ। यस अवधिमा बैंकले आक्रामकरूपमा ११ सयभन्दा धेरै शाखा सञ्जाल विस्तार गर्‍यो। १९ हजारभन्दा धेरै कर्मचारीका साथ २८ वटा प्रदेशमा आफ्नो प्रतिनिधित्व जनायो।
निजी क्षेत्रका बैंक मध्ये चौथो ठूलो बैंक बन्ने क्रममा एसले गत वर्ष २१ खर्ब भारतीय रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २२ खर्ब ५० अर्बको कर्जा परिचालन गर्‍यो। बैंकको वित्तीय विवरणको आकार ३४ खर्ब ५० अर्बको भयो। बैंकको आक्रामक बजार विस्तारसँगै शेयर मूल्य दुई रूपैयाँबाट ४०० रूपैयाँ नाघ्यो।
पछिल्लो समय बैंक डुब्यो भन्ने खबरले १८ रूपैयाँमा झरेको छ। बैंक पूर्णरूपमा समस्यामा परेपछि हाल रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको छ। बैंकलाई जोगाउन भारत सरकारले पछिल्लो समय एसबिआई बैंकलाई अगाडि सारेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार एस बैंक समस्यामा पर्नुको एउटा प्रमुख कारण बजारको भन्दा अत्याधिक व्यवसाय वृद्धिको होडबाजीले हो। त्यस्तै खराब कर्जा लुकाउन बैंकले हदैसम्मको तरिका अपनाएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
बैंकले आफ्नो वृद्धिदरलाई टिकाउन कर्पोरेट कर्जालाई धेरै ध्यान दियो। नेपाली बैंकहरूले पनि कर्जा प्रवाह गर्दा सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।